ESI EME KA ESERESE NA KỌMPUTA - ESI MEE - 2019
Otu esi eme ka eserese na kọmputa gị site na iji Toon Boom Harmony
Ọ bụrụ na ịchọrọ ịmepụta eserese nke gị na ihe odide nke gị na ihe nfe mara mma, mgbe ahụ, ị ​​ga-amụta otú ị ga-esi rụọ ọrụ na mmemme maka ịme ihe nlereanya atọ, ịbịaru na mmegharị. Ihe omume ndị dị otú a na-eme ka ndapụta site na etiti iji gbaa katuunu, ma nweekwa ngwaọrụ ndị na-akwalite ọrụ na mmegharị. Anyị ga-agbalị ịnweta otu n'ime mmemme kachasị ewu ewu - Toon Boom Harmony.
Ọ bụ Boom Harmony bụ onye ndú nke software. Na ya, ị nwere ike ịmepụta maapụ 2D ma ọ bụ 3D na kọmputa gị. Usoro mbipute nke usoro ihe omume a dị na weebụsaịtị gọọmentị, nke anyị ga-eji.
Olee otú iji wụnye Toon Boom Harmony
1. Soro njikọ dị n'elu ụlọ ọrụ onye mmepụta ọrụ. N'ebe a, a ga-enye gị ohere ibudata nsụgharị atọ nke usoro ihe omume ahụ: Ihe dị mkpa - maka ọmụmụ ụlọ, Advanced - maka ụlọ ọrụ nke onwe na nke adịchaghị - maka nnukwu ụlọ ọrụ. Download ihe dị mkpa.
2. Iji budata usoro ihe omume ahụ, ị ​​ga-edebanye aha ma gosi ndebanye aha.
3. Mgbe ị debanyere aha, ị ga-ahọrọ sistemụ arụmọrụ nke kọmputa gị wee malite ibudata.
4. Gbaa faịlụ a ebudatara ma malite itinye nhazi Toon Boom.
5. Ugbu a, anyị ga-echere ruo mgbe echichi ahụ zuru ezu, mgbe ahụ, anyị nabatara nkwekọrịta ikike ma họrọ usoro nhazi. Chere ruo mgbe arụnyere ihe omume ahụ na kọmputa gị.
Emela! Anyị nwere ike ịmalite ịmepụta eserese.
Otu esi eji Toon Boom Harmony
Tụlee usoro nke ịmepụta oge na-aga n'ihu. Anyị na-amalite usoro ihe omume ahụ ma ihe mbụ anyị mere iji mee ka eserese bụ iji mepụta ebe a ga-eme ihe ahụ.
Mgbe anyị mepụtara ihe omume a, anyị na-akpaghị aka nwere otu ntụpọ. Ka anyị kpọọ ya Mpụta ma mepụta ndabere. Iji ngwá ọrụ "Rectangle" wepụta ntanetị, nke dị ntakịrị karịa akụkụ nke ebe ahụ ma site na enyemaka nke "Paint" mee ka jupụta na ọcha.
Ọ bụrụ na ịnweghị ike ịchọta palette acha, wee gaa n'aka nri, chọta ngalaba "Agba" ma gbasaa taabụ "Palettes".
Anyị chọrọ ịmegharị ntụrụndụ nke bọl. Maka nke a, anyị chọrọ okpokoro 24. Na mpaghara "usoro iheomume", anyị na-ahụ na anyị nwere otu etiti nwere ndabere. Ọ dị mkpa iji gbatịa etiti a na okpokoro iri abụọ na anọ.
Ugbu a mepụta ozigbo ọzọ ma kpọọ aha ya. Na ya anyị na-ahụ nlele nke bọl na-awụlikwa elu na ọnọdụ dị mma nke bọl maka okpokoro ọ bụla. Ọ na-achọsi ike ime ka akara niile dị na agba dị iche iche, ebe ọ bụ na ọ dị mfe iji eserese dị otú a mee ka eserese. N'otu ụzọ ahụ dịka nzụlite, anyị na-agbatị ihe osise ahụ na okpokoro 24.
Mepụta ala ohuru ohuru ma were ala ma o bu penshicha dee ala. Ọzọ, gbatịa oyi akwa na 24 okpokolo agba.
N'ikpeazụ, ịbịaru bọl. Mepụta Oghere Layer ma họrọ etiti mbụ nke anyị na-ese bọl ahụ. Ọzọ, gaa na etiti nke abụọ na n'elu otu akwa ahụ na-esote bọl ọzọ. Ya mere, anyị na-adọta ọnọdụ nke bọl maka okpokoro ọ bụla.
Mgbe ị na-ese onyinyo ahụ na ahịhịa, ihe omume ahụ na-eme ka o doo anya na ọ dịghị ihe ọ bụla na-eme ka e nwee esemokwu ahụ.
Ugbu a, i nwere ike wepu ihe odide ihe osise na ndokwa ọzọ, ọ bụrụ na ọ bụla. Ị nwere ike ịgba ọsọ ọsọ.
Na nkuzi a agafe. Anyị gosiri gị ihe kachasị mfe nke Toon Boom Harmony. Na-amụ ihe omume ahụ n'ihu, anyị nwekwara obi ike na ka oge na-aga, ọrụ gị ga-adọrọ mmasị karịa ma ị ga-enwe ike ịmepụta eserese gị.
Download Toon Boom Harmony site na saịtị ọrụ.
Hụkwa: Ngwaọrụ ndị ọzọ maka ịmepụta eserese